Madaxweynaha SOomaaliya oo raiisul wasaare u magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon(Saacid). – SBC
Madaxweynaha SOomaaliya oo raiisul wasaare u magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon(Saacid).
25 Maalmood ka dib Madaxweyne Xasan Sheeq Maxamuud waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay Raiisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya kaas oo noqonaya Cabdi Faarax Shirdoon(Saacid).
Kulan gaaban oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya islamarkaana ay goob joog ahaayeen labada masuul ee ugu sareeya dalka Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamanka ayaa loogu dhawaaqay Raiisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon(Saacid) in uu noqdo, waxaana lagu wadaa in maamaha soosocda uu hortago golaha Baarlamanka Soomaaliyeed si ay u ansixiyaan.
Cabdi Faarax Shirdoon(Saacid) waa nin ku cusub maslaxa siyaasada Soomaalida waxaana uu ka mid yahay Ganacsatada waaaweyn ee Soomaaliyeed islamarkaana waa nin dalka ku sugnaa mudadii Burburka uu ku jiray dalka .
Umada Soomaaliyeed gebi ahaanteedba waxay u dhega taagayeen raiisul wasaaraha cusub ee uu madaxweynaha Soomaaliya ku soo dhawaaqi doono kaasi oo iminka noqday Cabdi Faarax Shirdoon(Saacid).
jikoos musa says:
Aktoober 7, 2012 at 7:11 am
waar kismaayaa ku taqaane hal maad tihid ee nin baa waxaadan istaahilin kugula ku fay
Aktoober 7, 2012 at 7:30 am
xaskaagaa meesha ku geeyay shirdoon aqoon kumaad helin magacan qaaliga ah kii kuu doortayna xaqiiqaduu iska indho tiray (how Doctors are avialible in the Mogadishou Cabinet park
Aktoober 7, 2012 at 7:38 am
waan ka xumahay inaan in ra’iisul wisaraa loo doorto CV ah 83dii bachelor talyaani ah shaqaale wasaraaad maaliyadeed muddo kooban burburkii sadax sano ku taajiray kismaanyo beerhii mooska soomaaliyeed dhac ku haystay MP’s noqday R/W hada loogu yeero.
Aktoober 7, 2012 at 4:13 pm
wn ku faraxsanah raysul wasaaraha cusub
Aktoober 7, 2012 at 4:59 pm
Reerkii wadanka burburiyey dawladdii somalia dunshay ummaddii barakacshay, kufsaday dhacay oo sidaad aragteen waddankii ka dhigay ha la isugu wada daro caasimaddii madaxweynihii iyo ra’iisal wasaarihii maxaad ka filaysaan. war hoy reer puntlandow muqdisho waxaan xumaan iyo dhibaato iyo foolxumo ahayn idiinka imanmaayaane tashada haddii kale 40 sano oo kale ee socota waxaa iyo wax ka daran un baad kala kulmaysaan.